Furaha Smart Keypad Seddax Wejiga Diyaargarowga Mitir LY-SM350
Mitirka Wajiga Tooska ah ee Casriga ah (CTVT Operated) LY -...
Mitirka Wejiga Tooska ah ee Casriga ah (CT Operated) LY-SM ...
DIN-Tareenka Smart Single Wajiga Bixinta Joogtada MY-SM120
Heerka Bixinta Hore ee Bilaashka ah ee Keydka Furaha Cayiman ee Smart-LY-SM150
Mitirka Wejiga Halbeegga ah oo leh Mitirka Bi-Direction LY-BM12
Mitirrada LY-BM12 waa mitirrada caadiga ah ee qiime-ku-oolnimada qaab-dhismeedka caadiga ah, oo lagu dabaqi karo macaamiisha deggan iyo mashaariic-hoosaadka-hoosaadka. Way saxsan yihiin oo si wanaagsan ayey u ilaalinayaan hawlo lidi ku ah xakameynta, oo ku habboon aruurinta dakhligoodu yar yahay iyo xalalka ilaalinta.
Mitir LY-BM12 waxaa loogu talagalay qaab dhismeedka dabacsan oo bixiya fursado dhowr ah iyadoo la raacayo shuruudaha suuqa iyo macaamiisha.
Wajiga Labaad ANSI MET LY-ANSI11
Taxanaha LY-AS waa mitir koronto oo hal mar ah oo qiimeeya oo bixiya adeegsiga heer aad u sareeya oo sax ah iyo isku halleyn.
Mitirka taxanaha LY-AS waxaa loogu talagalay inay si buuxda u waafajiso heerarka ANSI, iyo deked isgaarsiineed oo ikhtiyaar u ah RS485 si ay u taageerto codsiyada AMR.
Wajiga hal-ka-hortagga heer-kulka ee Mitirka LY-BM13
Mitirrada LY-BM13 waa mitir-hal-beeg ah oo caadiya-qaab-caadi ah, oo lagu dabaqi karo macaamiisha deggan iyo mashaariic-hoosaadka-hoosaadka. Way saxsan yihiin oo si wanaagsan ayey u ilaalinayaan hawlo lidi ku ah xakameynta, oo ku habboon aruurinta dakhligoodu yar yahay iyo xalalka ilaalinta.
Mitirka LY-BM13 waxaa loogu talagalay qaab dhismeedka dabacsan oo bixiya fursado dhowr ah oo waafaqsan shuruudaha suuqa iyo macaamiisha.
Heerka Bixinta Joogtada ah ee Diyaarinta BS Keypad LY-KP12B
Mitirooyinka LY-KP12B waa mitir muraayadaha guriga caadiga ah oo horay loo sii diyaariyay oo leh BS isku dhafan iyo / ama noocyo kala jaad ah, oo bixiya adeegsiga heer sare oo sax ah iyo isku halayn, taasoo u oggolaaneysa isku xir hal weji.
Mitir LY-KP12B waxaa loogu talagalay in lagu saleeyo 20-bit Token iyadoo la raacayo tilmaamaha STS, si buuxda u hoggaansamaysa heerarka IEC oo lagu caddeeyay shahaadooyinka STS iyo SABS. Ka hortaggooda adag ee adag ee ay ka joojinayaan shaqooyinka lacag bixinta ayaa iyaga ka dhigaya aalado qiimo jaban oo loogu talo galay aruurinta dakhliga iyo xalka ilaalinta.
Mitirka Wejiga Maska oo leh Cabbirka Tamarta Firfircoon LY-BM11
Mitirka LY-BM11 waa mid qiima-jaban ku kacaya mitirka hal-wajiga ah, kaas oo lagu dabaqi karo macaamiisha deegaanka iyo mashaariic-hoosaadka-hoosaadka. Waa mid sax ah oo si wanaagsan loo ilaaliyay oo leh hawlo lidi ku ah xakamaynta, oo ku habboon ururinta dakhligoodu yar yahay iyo xalalka ilaalinta.
Mitirka LY-BM11 waxaa loogu talagalay qaab dhismeedka dabacsan oo bixiya fursado dhowr ah oo waafaqsan shuruudaha suuqa iyo macaamiisha.
Single Phase Smart Energy Meter , Single Phase Electric Meter , Single Phase bixinta Energy Meter , Single Phase Meter , Single Phase bixinta Meter , Single Phase Tocuu oo Meter ,